ONN: Mudee 22,2019-ABO: Waajjirri ABO Oromiyaa bakkoota hedduutti banamuu gabaafame! – Kichuu
Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Oromiyaa bakka garaagaraatti guyyaa har’aa Mudde 22,2019 banamee jira jechuun gabaasan. Haaluma kanaan Kaaba Shaggar Fiichee Salaaleetti guyyaa har’aa bakka hogganni ABO Miseensotni Shanee Gumii Gumii Sabaa ABO kan ta’an Jaal Ibsaa Nagawoo fi Jaal Jabeessa Gabbisaa bakka argamanitti sirna ho’aan eebbaan banamee jiraachuu nuuf himan.
Akkasuma magaalaa Sandaafaatti waajjirri ABO guyyaa har’aa kan baname yoo ta’u, uummatni Oromoo naannichaa sagantaa sana irraa qooda kan fudhatan ta’uu gabaasaniiru.Kib ba Lixa Oromiyaa Iluu Abbaa Booraa Aanaa Haluu keessattis waajjirri ABO guyyaa har’aa banamee jiraachuu gabaasan.
Kana malees Shaggar Lixaa Aanaa Calliyaa magaalaa Geedootti addi Bilisummaa Oromoo ABO’n waltjajjii marii bal’aa uummata waliin taasisuu nuu gabaasan. Sagantaa sana irraas jaal Amaan Filee miseensi Gumii sabaa ABO qooda kan fudhatan ta’uu gabaasaniiru.Waajjirri ABO Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti banamaa ture akkas itti fufee jiraachuutu gabaafame. Fuuldura kanattis Oromiyaa bakkoota garaagaraatti banamuu akka qabu irratti hojjetaa jiraachuutu himame.
ONN | Sirna Baniinsa Waajjira ABO kutaa Magaala Burraayyuu —-Kutaa1ffaa
ONN: Mudde 22,2019-Calliyaa: Godina shaggar lixaa Aanaa calliyaatti Miseensonni fi deeggartootni ABO waltajjii marii hoggantoota ABO waliin gaggeessan.
Waltajjii marii kana irratti Miseensi Gumii Sabaa ABO jaal Amaan Filee fi Qondaalli ABO gameessi Getaachoo Zallaqaa irratti argamaniiru. Akka jaal Amaan Filee Ummata waltajjii irratti argameef haasaa godhanitti Gaaffiin ABOn qabatee kahe deebi’eera jennee gara biyyaatti deebine miti kan kaleessa Qeerroon wareegama qaqqaalii kaffale sana hanga deebii argatutti yeroo kamuu caalaa ummata keenya waliin qabsoo biyya keessatti gaggeessina jedhanii dhufan Hoggantootni ABO gara biyyaa malee kaayyoo fi Akeeka qabsaa’otaa gatanii hin dhufne jedhan.
Itti fufuun Jaal Amaan ABOn akkuma gara biyyaa dhufeen fedhii ummata oromoo bal’aa guutuuf Godinootaa fi Aanota Oromiyaa bakkoota waajjira isaa banatee sochii gochuu eegaletti akka inni ummata isaa waliin hin hojjenneef waraanni mootummaa waajjiroota ABO cabsanii saamuu fi hoggantoota dhaabaa kanneen waajjira sanarra hojjetan mana hidhaatti guuran jedhan. Fakkeenyaaf Godina wallaggaa lixaa Magaalaa Gimbiitti waajjira ABO caccabsuun qabeenyaa isaa saamaniiru, wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti kan ani iyyuu keessa ture anaan hidhuun erga ani hidhamees waajjira ABO magaalaa Naqamtee caccabsuun document jiruu fudhatanii qabeenyaa hunda saamaniiru jedhan.
Kuni kan taheef Hoggantootni ABO ammas akkuma bara chaarteraa akka biyya irraa baqatuuf ture garuu hoggantootni dhaabaa kan gara biyyaa dhufan wareegama kamuu ummata isaa keessatti kaffaluuf gara biyyaa gale malee kan gaafa haalli mijatuuf gara biyyaa dhufee kan yeroo hammaatu baqatee bahu miti.
Kanaaf Miseensonni ABO kan yeroo kamuu caalaa kutataa fi murataa tahuu namuu beekuu qaba.
Hoggantoota ABO kanneen karaa nagaa waajjira ummatni Oromoo banee keessatti Akeekaa fi kaayyoo Dhaabaa barsiisaa fi ummata tajaajilaa jiranii hidhaman kanneen akka Jaal Kaayyoo Fufaa MGS-ABO fi Miseensa gameessaa fi Qondaala ABO jaal Milkeessaa IrKoo waajjira ABO Godina shaggar lixaa Magaalaa Amboo irraa qabamanii hidhaman akka ummatni Waajjira ABO baqatuu fi dhaaba kana balleessina jedhanii yaadaniiti malee badii qabaatanii miti.
Akkasumas miseensa gameessaa fi Qondaala ABO jaal Gammachuu Ayyaanaa dabalatee kanneen mana hidhaatti dararamaa jiran badii qabaatanii osoon taane dabballoota ABO biroo wareersanii hojii ala gochuuf yaadanii tahus qabsoon Qeerroo Bilisummaa oromoo gaggeessaa jiru kanaaf miti rasaasaa fi taankii wayyaanee illee hin sodaanne jedhan.
Filannoo dhufu irratti kan fuulaa fi hojii isaa beeknu kan filannu malee kan xalayaan maqaan isaa isinitti ergamee filattan tahuun qabu. ABO aangoo qabachuuf hin qabsaa’u ykn na filadhaa isiniin hin jedhu gaaffii ummata Oromoo waggaa dheeraa deebisuuf hidhaa fi ajjeechaa barattoota Oromoo fi ummata Oromoo bal’aa irraa hanbisuuf qabsoo gaggeessa.
Namootni isin filattan yoo sirnaan isin hin tajaajille yeroo barbaaddanitti kan aangoorraa kaastan malee kan barcuma isaa afaan qawween tikfatu miti. Maayii irratti jaal Amaan Filee ummata Aanaa calliyaaf waraqaa eenyummaa baafadhaa filannoof of qopheessaa akkasumas yeroo qabsoo kana gaggeessitan hidhaan hin jiru ajjeefamuun hin jiru jettanii hin yaadiinaa sababni isaa biyya kana keessa qabsoo karaa nagaa keessas hidhaa fi ajjeechaan jiraachuu mala waan taheef of qopheessaa qabsootti galaa jedhan.